HowTo: Wụnye Plasma 5.2 na ArchLinux / Antergos + Atụmatụ | Site na Linux
Ya anyị na-egosi ha ozi ọma na mmelite nke Plasma 5.2 na-ewetara anyị, n'oge a ka m ga-egosi gị otu esi etinye ma hazie ụdị KDE ọhụrụ a site Antergos, naanị na usoro ntọala. Nke a na-arụ ọrụ otu ihe ma ọ bụrụ na anyị wụnye ArchLinux site na ncha, n'ihi na Antergos na-eji otu ebe ahụ.
Ihe egosiri n'okpuru kwesiri ime na nsogbu gi. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka ọnwụ nke data gị ma ọ bụ ọdachi ndị dị otú ahụ.
1 Ntinye nke Antergos
2 Wụnye Plasma 5.2
3 Ndụmọdụ maka ndị ọrụ KDE 4.14.X
Ntinye nke Antergos
Usoro nrụnye nke Antergos dị mfe, ọ yiri Ubuntu nke ukwuu na emezuru ihe niile. Nanị ihe dị iche bụ na na nzọụkwụ ebe anyị na-ahọrọ Desktọpụ Environment nke mmasị anyị, anyị ga-ahọrọ nhọrọ Base, nke ahụ bụ, anyị agaghị etinye tebụl ọ bụla.
Anyị ga-eme ya n'ụzọ a n'ihi na ọ bụrụ na anyị họrọ KDE, ọ ga-arụnye ụdị KDE 4.14.4 na ọ bụghị echiche ahụ.
Wụnye Plasma 5.2
Na-eche na anyị etinyeworị Antergos na anyị nwere ihe niile dị njikere, anyị ga-etinye ngwugwu ndị dị mkpa iji nwee obi ụtọ Plasma 5.2. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara ha nsogbu na Network Ethernet (memo nye m) ma ha jiri DHCP, ha nwere ike ime ya iwu na iwu:
Ugbu a, anyị ga-agba ọsọ:
Ugbu a, anyị wụnye:
$ sudo pacman -S kdebase-dolphin kdemultimedia-kmix oxygen-gtk2 oxygen-gtk3 oxygen-kde4 breeze-kde4 kdegraphics-ksnapshot netwọk njikwa
O nwere ike ịjụ anyị ka anyị wepu khelpcenter ka ọ na-ese okwu. Anyị na-ewepụ ya n'enweghị nsogbu ọ bụla
Ndị a bụ nchịkọta dị mkpa maka ihe niile dị na KDE iji gosipụta nke ọma. Anyị enweghị ike ichefu ụfọdụ nkọwa:
Meta-ngwugwu xorg na-enye anyị ohere ịhọrọ ihe anyị chọrọ ịwụnye. Anyị niile enweghị otu kaadị vidiyo.
Anyị ga-arụ ọrụ NetworkManager na SDDM nke bụzi njikwa faili KDE.
$ sudo systemctl enyere sddm.service $ sudo systemctl ka NetworkManager nwee
Anyị nwere ike ịmalitegharịa ugbu a 😀
Ndụmọdụ maka ndị ọrụ KDE 4.14.X
Site na nbido nwayọ nke nchịkọta nke nsụgharị KDE ọzọ na nke ugbu a, a na-akwadozi faịlụ nhazi ugbu a n'ụzọ dị iche dịka m kọwara na post nke ọzọ. Agbanyeghị maka KDE4 ntọala ntọala ga-edobe ya ~ / .edee /, maka ngwa ọhụrụ ha ga-echekwa na ~ / .config / dị ka Ogba Wiki.
Ugbu a n'ime ~ / .nhazi enwere faịlụ dị oke mkpa a na-akpọ kdeglobals nke m kwuru maka ihe ndia: o mere m na ngwa dika Kate o Konsole Ha ewerela ụdị mpempe akwụkwọ m nwere maka usoro ihe fọdụrụ, yabụ m ga-eji aka ya. Kedu? Mfe.
Ọ bụrụ na nke a emee gị, anyị mepee faịlụ ahụ ma chọọ ngalaba General nke kwesịrị ịdị ka nke a:
[General] ColorScheme = Aha Udo = Ohere OchieSortColumn = eziokwu
na anyị na-ahapụ ya dị ka nke a:
Ma n'ezie, ha ga-anọchi Tahoma na Ubuntu Mono maka mkpụrụ akwụkwọ ha na-eji maka sistemụ. Ọ dịghị mkpa ịmalitegharị PC ma ọ bụ wepu oge, anyị na-eji ngwa nsogbu mechie ngwa ahụ na ọ bụ ya.
[... edezi mgbe niile ...]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » HowTo: Wụnye Plasma 5.2 na ArchLinux / Antergos + Atụmatụ
Enwere m ajụjụ:
- you nwere ike ịme WiFi site na ntinye ntọala? N'ụzọ dị otú a ọ gaghị adị mkpa iji jikọọ eriri ethernet.
N'oge m na-eji Archbang na m ga-achọ ịnwale Plasma 5, kedu maka nkwụsi ike? Daalụ 🙂
Dị ka mgbọrọgwụ tinye # wifi-menu ọ ga-emeghe ihe atụ ịhọrọ netwọk ma tinye ngafe. Mgbe ahụ ị nwere ike nwalee njikọ dị na # ping -c 3 http://www.google.com.ar ị ga-ahụ ma ọ jikọtara ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Emere m nke a site na nnukwu post -> https://blog.desdelinux.net/guia-de-instalacion-de-arch-linux-2014/
Zaghachi ka dtulf
Mgbe Upgrading ka Plasma na Arch Kmix ọ naghị amalite na buut, M ga-amalite Iji aka ... M ga-Wụnye ya ọzọ? N'ihi na n'ime sistemụ sistemụ enweghị ụzọ iji tinye Mpịakọta Mpịakọta
Zaghachi José Jácome
Ana m anwale plasma 5 na OpenSUSE Tumbleweed, na kmix na-amalite n'enweghị nsogbu na tray ahụ, nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ kmix na kmix5 ma ị nwere ike iji kmix.
Ruo ugbu a, enyebeghị m ohere ọ bụla. Ọ na-eri oke ebule, plasmashell bidoro na megabytes 150 ma ọ ga-agarịrị 230 n’ihe dị ka nkeji iri atọ eji (ihe niile a, ugbu a ihe niile gwụchaa “shei” 😀). Enwere mmiri dị ukwuu na ihe nkiri ahụ na ngwa ga-emepe ngwa ngwa.
"Ihe ọjọọ" bụ na enweghị m ike ịchọta isiokwu oxygen maka windo windo, ọ masịrị m nke ahụ n'elu ikuku.
Site na ihe m hụgoro, ozugbo ebudoro mmemme niile ahụ na qt5, plasma 5 ga-abụ onye ruru eru na nke anọ.
Ndewo, nke a bụ "ahụhụ":
"Ihe kpatara arịrịọ: kmix-14.12.1-1 dị mkpa kama kmix-multimedia maka kmix kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ n'okpuru Plasma 5."
Na nke ọzọ, olile anya na ụbọchị ole na ole, a ga-eji "Kmix" dochie kdemultimedia-kmix. Nwere ike ịgụkwu nkọwa na njikọ ahụ ...
Ọfọn, mgbe ọ na-adịghị pụta, M na-amalite ya aka na ọ bụ ya 😀
Daalụ @hector, ọ bụ eziokwu na m nwere kmix ọ bụghị kmix5 n'ihi na ọ dị ka Oxygen mgbe m ji aka ya bido… Ma @ BD550 dị ntakịrị na RAM Plasma Nke ọzọ, ụbọchị ọzọ m bịara Occupy 4200MB!
Ihe ngwọta ọzọ dị mfe bụ ịgbakwunye "kmix-multimedia" na Mmasị Sistemụ -> Mmalite na mmechi. Na-agba ọsọ na mmalite.
Emere m ya 😀
Ndewo, maka ndị nwere nsogbu sddm, ikekwe ọ bụ n'ihi na awụnyebeghị ya.
Ejiri pacman -S sddm na voila arụnyere ya.
Ajuju enwere m ihe nile etinyegoro di ka ihe di nma mana site na ihe m huru bu kde 4.14 na brezee nsogbu bu na o tinyeghi mgbanwe di na ihu obuna n’agbanwe ahuhu na ihe nile n’adiri dika o si buru na ndabara, ya bu, ya na akwụkwọ ahụaja na akara ngosi mgbe emechiri. nnọkọ ga-anọ ọzọ dị ka a ga - asị na ọ bụ oge izizi ị banyere
M wụnye ya ụnyaahụ na Arch na ihe niile dị ma ọ bụ obere na ọnọdụ ya. Mgbanwe ahụ akpasasịghị m obi; n'ezie enwere nsogbu ụfọdụ m nwere na KDE 4.14. N'ụzọ dị mwute, enwere akara ngosi Plasma 5 (na menu ahụ, wijetị ngwaọrụ mbugharị, ma ọ bụ ọbụna cashew) ndị na-ele anya na plasmoids anọghị n'ọnọdụ m. Amaghị m otu esi edozi ya ma ọ bụ ebe esemokwu ahụ nwere ike ịdị ,: S
Enwere m nsogbu xD abụghị nnukwu nsogbu mana damn haha, a ga m eji aka bido "sddm" na nhọrọ "mmalite" ebe "nwee ike" na - ekwu "ida nke dị adị": you nwere aro iji dozie ya ? Na “isi okwu” ọ bụla nke ị kwadoro? ekele!
Ndewo shini-kire, naanị ị ga-gbanyụọ nke ị rụnyere ma kwado sddm, dịka ọmụmaatụ ị gbanyụọ gdm "$ sudo systemctl disable gdm.service" ma mee sddm "$ sudo systemctl enable sddm.service" na ọ bụ ya, bidogharịa .
Zaghachi ka Harry marcano zaghachi
Nwachukwu 93 dijo
Ndewo, enwere m ajụjụ ugbu a enwere m arch na kde 4 anụ nke nsụgharị, mana emeela ka m mara ya wee wụnye plasma 5 .. nke a bụ ajụjụ m nke mbụ na m ga-ewepụ mbụ wee kụnye ihe ịwụnye. ma obu kedu ka esi eme ya? ihe m na-achọghị bụ ka ihe ọ bụla ghara ihichapụ faịlụ m nke onwe m ... daalụ n'ọdịnihu
Ndewo jedr93, Wepu nke ị rụnyere "$ sudo pacman -Rc kdebase-workspace" ma wụnye plasma "$ sudo pacman -S plasma-meta" ị nwere ike iduzi onwe gị na wiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Plasma
Ọ dị mma, mana ọ kwụsiri ike ugbua? Enwere m archlinux na kde 4.14.8 ma acho m iwunye kde plasma 5.2 n’enweghi nsogbu.
Nnọọ! Kedu ka ị mere ?
Daalụ maka ịme ntuziaka ndị a! 😀
Know mara na emere m Arch dị ọcha ma wụnye ihe niile ị gosiri mana gburugburu adịghị arụ ọrụ nke ọma, mgbe ịbanye na itinye KDE mmanya ọ dị ka desktọọpụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, enwere m naanị menu menu nke «ihe oyiyi - video - music »na enweghị m ike ime ihe ọ bụla. You ma ihe ọ nwere ike ịbụ?